Zava-pisotro Isotonic - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
zava-pisotro1 minitraOlona 4
Ny fialan-tsiny rehetra dia tsara hialana sasatra amin'ny fisotroana isotonic namboarina. Indrindra aorian'ny a fivoriana ara-panatanjahantena na andro feno hetsika.
Tadidiko manokana indray andro izay ny vadiko sy ny zanako vavimatoa nandeha bisikileta nandritra ny adiny iray. Rehefa tonga izy ireo dia nangataka ahy voalohany tamin'ny Aquarius® ny zanako vavy ary mampatahotra inona izany! vita io. Tadidiko izany ary vetivety dia namboariko izy io miaraka amina singa vitsivitsy ary amin'ny fomba tsotra.
Les tiako be Ary nanomboka tamin'izay dia efa nampiasaiko matetika tamin'ny fisotroana taorian'ny fifaninanana nilomano na andro tsy nijanonana. Tianay ny mitondra azy io eo amin'ny sezalava sy misakafo barany angovo… Tsy maintsy mamerina ny tanjaka ianao!. 😉
1 Fisotro Isotonic
Zava-pisotro mamelombelona mamelombelona mba ho sitrana amin'ny hetsika sarotra.
Karaoty 2, voahidy ary iray manontolo
Voasarimakirana antonony 3
Manomboka ny Thermomix® izahay, amin'ny hafainganam-pandeha 6. Arotsahy ao anaty siny ny karaoty ary avelao hifangaro mandritra ny segondra vitsy, mandra-pahatonga azy ireo ho feno grated tanteraka.
Ampio ny voasarimakirana efa voasasa, tsy voaroaka ary natoraly, ny siramamy ary ny rano. Manery izahay 5 na in-6 ny bokotra Turbo misy hitsika maina.
Arotsaho amin'ny fantsom-bary tsara totozy ao anaty siny misy ranomandry.
Manompo avy hatrany izahay.
Fanazavana fanampiny - Bara serealy
Loharano - Boky Ny fomba fahitan'ny mpanolotra anay.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Misotro sy ranona, Tsotra, Latsaky ny 15 minitra, Resipeo ho an'ny ankizy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Misotro sy ranona » Fisotro Isotonic
Tena manan-karena! Nanandrana azy tao amin'ny kilasy thermomix manokana aho ary tiako izany, saingy mbola tsy nomaniko mihitsy. Tena manana an'io boky io koa aho.
Mahafinaritra, Piluka!. Sahia manao azy. Oroka.
Omaniko ho an'ny zanako ity iray tena matsiro ity rehefa tonga hiofana amin'ny bisikileta izy ireo, hitanao ny mangatsiaka frezy izay ao amin'ny speedcuchara.com, buinisimoooooooo io. Manana tombony izao satria misy frezy. FIOMPIANA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tomells
Salama Mari Carmen, tiako ny semi-cold, efa hitako io ary heveriko fa hataoko amin'ity andro ity. Mirary ny soa indrindra.
Salama! Miala tsiny, fa tsy azoko hoe maninona ianao no tsy maintsy mampiditra ilay sobika ao anaty vera raha toa ka efa atsofohy ao anaty siny ny ranon'ilay thermomix. Misaotra Tena tiako ny bilaoginao, mijery isan'andro aho.
Salama Conchi, manana sambo roa; izany hoe, ny sisa tavela dia mitoetra ao anaty vera amin'ny alàlan'ny harona ary ny sivana dia miasa ho toy ny sivana farany mba tsy hisy hianjera. Miarahaba ary tena faly aho fa tianao ny bilaoginay.
Hiezaka ny hanao tirita aho satria miaraka amin'ity zava-pisotro ity foana ny zanako lahy rehefa vita ny fisaorana azy ………………… ..
Ho hitanao fa mahafinaritra, Sandra. Manantena aho fa tianao izany.
Ana Martin dia hoy izy:
Salama Elena, hatramin'ny volana desambra dia manana ny thermomix (fanomezana tsy ampoizina avy amin'ny vadiko) aho ary faly aho. Isan'andro aho mijery ny bilaoginao ary manampy ahy be dia be izany. Manana fisalasalana kely aho, satria diabeta ny vadiko. Hanomana an'ity zava-pisotro isotonic ity aho, saingy azonao atao ve ny manoro hevitra ahy hoe ohatrinona ny saccharin azoko apetraka, fa tsy siramamy, na eto na amin'ny fomba fahandro hafa. Misaotra ary miarahaba anao amin'ny ezaka nataonao
Valiny tamin'i Ana Martín
Salama Ana, ny zavatra tsara indrindra dia ny mijery ilay boaty mamy. Amin'ny lafiny rehetra dia misy ny fitovian'ny saccharin amin'ny siramamy. Samy hafa ny marika tsirairay ary tsara kokoa ny manaraka ny torolalany. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay. Faly aho fa tianao ny bilaoginay!
Salama zazavavy, zava-pisotro mahasalama tokoa ny marina ary izao manomboka ny hafanana dia maniry bebe kokoa ianao. Matetika aho no ataoko any an-trano matetika, fa tsy toy ny zava-pisotro fanatanjahan-tena fotsiny, fa miaraka amin'ny sakafo fa tsy zava-pisotro mahazatra. Tena tianay daholo izany, diabeta aho ary manampy mamamamy, nefa mivoaka fotsiny manan-karena. .Ny tsara indrindra rehetra.
Faly aho fa tianao izany, Nuria!. Ny marina dia fisotroana tonga lafatra mandritra ny fotoana fohy. Mirary ny soa indrindra.
carai, mbola tsy tonga tato amiko mihitsy !!
Milalao hokei ny zanako lahy ary ho an'ireo lalao dia ividianako azy foana ity karazana zava-pisotro ity dia hataoko ho azy izao.
Valio ny PEPI
Manantena aho fa tianao izany, Pepi, hoy ianao amiko.
Salama Elena, te-hanamboatra azy aho, mandra-pahoviana no hitazona azy ao anaty vata fampangatsiahana? misaotra miarahaba
Salama Alicia, ny marina dia vitantsika tao anatin'ny iray andro izy io, saingy mino aho fa telo andro dia mijanona ho lavorary. Aleo mihinana azy io rehefa manao azy mba tsy ho very vitamina. Manantena aho fa tianao izany, hoy ianao amiko.
Meliade dia hoy izy:
Tsy noheveriko fa misy karaoty sy voasarimakirana io, azo antoka fa tsara lavitra noho ny aquarium tany am-boalohany !!
Manana fanontaniana aho fa tsy momba ny fomba fahandro izany; Tiako ho fantatra ny fomba fanoratanao momba ny sary, amin'ny programa inona no anaovanao azy? Misaotra betsaka 😀
Mamaly an'i Meliade
Salama Meliade, misy programa marobe fa Photoshop na Picnic no ampiasaiko.
Salama namana 37 taona aho ary mazàna mihazakazaka mihazakazaka matetika, dia misoratra anarana hanao hazakazaka malaza aza, tiako ny hametrahanao zava-pisotro isotonic bebe kokoa satria manana thermomix na resipeo aho izay misy angovo betsaka hampiofanana tsara sy amin-kery. Misaotra aho fa hanohy hanoratra bebe kokoa
Salama Antonio, mbola tsy nanao resipe ho an'ny zava-pisotro ara-panatanjahantena aho. Manantena aho fa manankarena izy io, raha izany dia hapetrako ny recette. Misaotra betsaka amin'ny soso-kevitrao, hevitra tsara izany. Mirary ny soa indrindra.
Salama, arahaba soa ary misaotra anao manome hevitra tsara be dia be ho ahy, tiako ny pejinao ary jereko isan'andro. Te hahafantatra aho hoe maninona no mangidy ny fisotroana angovo ny ampitso, tsy natao vao vita. MISAOTRA
Salama Rosi, dia toy ny hoe rehefa manao ranom-boasary ianao dia lasa mangidy ny ampitso, ary ity zava-pisotro ity dia misy voasarimakirana ihany koa. Atao amin'ny antoandro io. Miarahaba ary faly aho fa tianao ny bilaoginay. Misaotra betsaka anao nijery anay!
mmmm k ricaa! Ny fotoana voi acer x 2º sy xro dia manana fisalasalana aho satria ny fizarana ny voasarimakirana amin'ny efamira? misaotra anao ry muxas
Salama Stefa, tsy maintsy mizara azy ireo amin'ny faritra 4 ianao. Mirary ny soa indrindra.
Mahagaga, fomba fahandro iray hafa izay tena ilaina tokoa, miarahaba anao aho amin'ny bilaoginao.
Misaotra indrindra Jesosy!
Vao nanao an'io aho ary fahombiazana tao an-tranoko! Fanovana kely ihany no nataoko, amin'ny maha valentianina tsara ahy ... nasiako voasary ary ity avy amin'ny sarimihetsika! Ah! Ary izaho koa very ny zava-drehetra tamin'ny turbo! Haha! Tokony ho ara-dalàna izany satria nahatratra hatramin'ny farany ambony ny masinina…. hehe
Salama Carmen, faly aho fa tianao izany! Ny tena marina dia miaraka amn'ny turbo dia miparitaka kely izy, saingy mendrika izany. Tena tsara ny manampy voasary. Mirary ny soa indrindra.
Salama Elena, azafady fa tsy nahavaly anao teo aloha aho, faly aho raha toa ianao mametraka masaka be dia be ho an'ity karazana zava-pisotro isotonic ity satria mahamenatra ny fijanonana ny thermomix na tiako ho anao koa ny mametraka recette ho an'ny proteinina namboarina. mihozongozona, misaotra miarahaba anao Elena
Salama Antonio, hiezaka ny hametraka fomba fahandro bebe kokoa amin'ity karazana ity izahay. Mirary ny soa indrindra.
Salama, andro vitsivitsy lasa izay dia hitako ny bilaoginao ary nidera anao indrindra aho tamin'ny nanomezanao anay ampahany amin'ny zavatra niainanao ho an'ny fahafinaretanay. Tao an-trano tamin'ity faran'ny herinandro ity dia nahatratra ilay antsoin'ny dokotera hoe "viriosy" izahay ary satria tsy naniry zavatra hafa ny vatana dia tadidiko ny "fisotroana milomano" (satria ny zanako tsy nihinan-kanina nefa ny fialambolin'izy ireo tsy miala sasatra ary hitanao ny angovo ijanonany. !). Fa fahombiazana izay fantatro tsikelikely ary tsy maintsy nanao fihodinana hafa aho. Misaotra betsaka ... ary tohizo toy izao ...
Misaotra betsaka Ana !. Faly be aho fa tianao izany ary antenaiko fa efa nandao ny tranonao io fitsidihana tsy nampoizina, ilay virus io. Mirary ny soa indrindra.
Atleta mahazatra aho ary tena tsara ny zava-pisotro. Arahabaina
Misaotra betsaka Pedro!
Salama Elena, tiako ny ilazanao ahy ny fomba fahandro hisotroana ho lasa brunette, misaotra
Tsy maintsy mampiasa karaoty ianao mba hahatonga anao ho volontany. Ka avelako anao ity hevitra ity ary lazao ahy hoe manao ahoana ianao?
Rano 100 gr
Siramamy 50 grama
Voaso ny karaoty sy ny volomboasary dia ampidirintsika amin'ny vera miaraka amin'ny voatabia, tsy misy peeling. Ampianay ny rano sy ny siramamy. Hafainganana 5 mandritra ny 5 segondra ary miakatra hatrany hatrany amin'ny 10. Avelantsika amin'ny heriny manontolo mandritra ny roa minitra.
Ampiarahinay ny ranomandry, atsanganay ny vel. amin'ny 5, dimy segondra hampisarahana azy ireo ary avy eo mandroso ho 10, segondra vitsy hafa.
Ho hitanao ny fomba matsiro!
Tsara, nomarihiko ny fomba fanaovana azy, atleta ny zanako lahy ary hataonay izany, holazaiko anao izany, novidiako izy andro vitsivitsy lasa izay, ary ny zazalahy, na ny zanako lahy aza gaga, Nilaza izy fa io no iray amin'ireo zavatra tsara indrindra novidiko Miarahaba ahy ary miditra ao amin'ilay vondrona aho, misaotra.
Valiny amin'i TERESA
Tongasoa !! !! ho hitanao fa tsy ho azonao an-tsaina ny lakozia eto raha tsy eo ianao.
Manantena aho fa tianao ity fisotroana ity. Ah! Ary misaotra tamin'ny hevitrao.
Vary misy zucchini sy mint